QORMO KU SAABSAN AXKAAMTA BISHAN RAMADAAN EE BARAKAYSAN (HORDHAC)"1"
Subject: QORMO KU SAABSAN AXKAAMTA BISHAN RAMADAAN EE BARAKAYSAN (HORDHAC)"1" Sun Aug 22, 2010 7:30 pm
Walaalayaal, waa lagama maarmaan inaynu oggaano inay tahay sideedaba gallad iyo nimco qofkii uu Allaah (sw) waafajiyo inuu gaaro bisha ramadaan. Sidaa darteed, waxaa habboon inaan Ilaahay uga mahad celinno nimcadaan uu nasiiyay inaan haleelno bisha fadliga badan ee Ramadaan. Imisa dadka ka mid ah ayaa jira oo aan la waafajinin inay gaaraan bisha ramadaan, oo iyadoo wax yar ay ka hartay geeriyooday, amaba haleelay bisha ramadaanka, hase ahaatee aan la waafajinin inay ka faa'iideystaan!! Allaahow khayrkaaga hanaga xarimin…aamiin aamin aamin.
Waxaan halkaan idiinku soo gudbinaynaa kalmado kooban oo kusaabsan soo dhawaynta bisha ramadaan, anago rajaynayna inuu Allaah nagu anfaco sawaabkana nawaafajiyo,nagana dhigo kuwii laga aqbalo soonkooda iyo salaadoona,naartana looga xoreeyo anaga iyo waalidkeenba..aamiin aamin aamin.
Wuxuu Rasuulka (scw)ugu bishaarayn jiray muslimiinta dhalashada bisha ramadaan.
Sida uu werinayo Imaamu Dabari, wuxuu Rasuulka (scw) ahaa markay timaaddo bisha Rajab kii yiraahda "Alloow noo barakeey Rajab iyo Shacbaan, waxaadna na gaarsiisaa ramadaan-ka".
Caa'isha Ilaahay ha ka raalli noqdee iyadoo noo iftiiminaysa siduu Nebiga (scw) ugu dadaali jiray salaatu-leylka waxay tiri "ha ka tagin salaadda leylka, maxaa yeelay ma uusan Rasuulka (scw) ka tagi jirin. Haddii uu xanuunsan yahay ama uu caajiso fadhiga ayuu ku tukan jiray". Salaadahaas iyo dadaalkaas wuu sii laba-laabi jiray Rasuulka (scw) marka la gaaro ramadaanka, saxaabadana waxay ahaayeen kuwa kaga shidaal qaata sunnadaas.
Xaddiis uu weriyay Imaam Axmad, uuna ka werinayo Abuu Hureyra Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu Rasuulka (scw) yiri xaddiis macnihiisu ahaa: "waxaa idiin yimid bishii ramadaan, wuxuu Allaah (sw) idinku waajibiyay inaad soontaan, bishaas waxaa la furaa albaabada Jannada, waxaa la xiraa albaabada Naarta, waxaa la xiraa shayaadiinta, waxaa ku jirta habeen ka kheyr badan kun habeen, ruuxii laga xarimo kheyrkeeda waa qof kheyr laga xarimay". Haddaba, bisha sidaas u kheyrka badan waxaa habboon inaynu ku dadaalno sidii aan uga faa'iideysan lahayn kheyraatkeeda, oo aan gadaal danbe aanan uga qoomamayn.
Walaalayaal, waxaa nalaga doonayaa inaynu bishaan kheyrka badan aan ku qaabilno towbad badan, qur'aan aqris badan, salaad badan, baarifalka iyo samafalka waalidka, waxtarka iyo taageerada dadka dhibaataysan, islaaxinta iyo xiriirka qaraabada iyo dhammaan waddooyinka kheyrka ee uu Allaah (swt) raalliga ka yahay. Bisha ramadaan waa bishii naxariista. Waa bishii denbi dhaafka badneyd. Waa bisha la iska xorreeyo naarta.
Lama koobi karo fadliga bisha ramadaan, waxaana ka mid ah in la aqbalo ducada addoomada suubban ay baryayaan Rabbi (sw). Wuxuu (sw) yiri isagoo ka hadlaya arrintan "hadduu addoonkayga xaggeyga wax iga weydiisto waxaan u ahay mid u dhow oo aqbala ducada markuu wax i weydiisanayo" aayadda 186 suuradda Al-Baqara.
Dhinaca kale, xaddiis uu Imaam Axmad ka weriyay Rasuulka (scw) wuxuu Rasuulka (scw) yiri "seddex ducadooda lama celiyo", waxayna saddexdaas kala yihiin:
”qofka sooman markuu afurayo, imaamka caadilka ah iyo qofka la dulmiyay habaarkiisa".
Walaalayaal, sidoo kale bisha ramadaan waa bil caanbaxsan deeqsinimada, samafalka iyo ixsaanka. Cabdullaahi Binu Cabbaas Ilaahay ha ka raalli noqdee wuxuu yiri "Rasuulka (scw) wuxuu ahaa kan dadka ugu deeqsinimada badan, wuxuuna ugu sii deeqsinimo badnaa bisha ramadaan, gaar ahaan waqtiga uu la kulmayo malaga Jibriil (cs), habeen kasta wuu la kulmi jiray Jibriil iyagoo daraasayn jiray qur'aanka".
Sidaa darteed, wuxuu Imaamu Shaafici yiri "waxaan jeclahay inuu qofka badiyo deeqsinimada si uu ugu daydo Rasuulka (scw).
Bisha ramadaanka waxaa ku jira habeen ka kheyr badan kun habeenood, sida uu Allaah (sw) noogu sheegay suuradda Al-qadr. Inkastoo aan habeenkaas la cayimin habeenka ay ku beegan tahay, haddana waxaa muslimiinta laga doonayaa inay ku dadaalaan dhammaan habeenada iyo maalmaha ramadaanka uu ka kooban yahay, si ay uga faa'iideystaan fadliga ramadaanka.
Walaalayaal, cibaadada Soonka wuxuu qofka dhaxalsiiyaa Jannada iyo inuu ka galo maalinta qiyaamaha mid ka mid ah albaabada Jannada, kaasoo loogu magacdaray Rayyaan. Saxaabiga la yiraahdo Sahal Binu Sacaad ayaa wuxuu Rasuulka (scw) ka weriyay isagoo leh "waxaa jannada dhexdeeda ahaaday irid la yiraahdo Rayyaan, iridkaas ayeey dadkii soomanaa ka soo galayaan maalinta qiyaamaha, qof aan iyaga ahayn kama soo galayo, waxaa la oranayaa aaway dadkii soomanaa?, markaas bay istaagaan qof aan iyaga ahayn ma soo galayo".
Walaalayaal haddaba markaan aragnay faa'idoonyinka bishan barakeysan waxaa lama huraan ah in aan ka faa'ideysano kheyraadka badan oo bishaan.
Waxaan Allah swt ka baryaynaa inoo ka dhigo camal mid raali ahaanshaha wejigiisa lagu raadsho, nagana aqbalo camalkeena midkiisa saalixa ah.
Waxaana dhamaan idin leenahay
Wasalamu alaikum waraxmatulaahi wabarakaatuh
Subject: Re: QORMO KU SAABSAN AXKAAMTA BISHAN RAMADAAN EE BARAKAYSAN (HORDHAC)"1" Sat Aug 28, 2010 7:52 am
jazaakalaahu khayraa walala
Subject: Re: QORMO KU SAABSAN AXKAAMTA BISHAN RAMADAAN EE BARAKAYSAN (HORDHAC)"1" Mon Aug 01, 2011 7:46 pm
Subject: Re: QORMO KU SAABSAN AXKAAMTA BISHAN RAMADAAN EE BARAKAYSAN (HORDHAC)"1"